Andre Pirlo Oo Kahadalay Xidiga Reer Portugal Ee Ronaldo Ka Hor Kulanka Caawa
Home Horyaalka Italy Andre Pirlo oo kahadalay Xidiga Reer portugal ee Ronaldo ka hor kulanka...
Ninka shanta jeer ku guuleystay abaal marinta Ballon d’Or Cristiano Ronaldo ayaa ka ciyaari doona dalkiisa Portugal markii ugu horeysay caawa tababare Andrea Pirlo ayaa filanaya wax gaar ah oo ka sameeyo kulankaas.
Kooxda Juventus ayaa la kulmeysa Porto kulan ciyaareed qeyb ka ah Champions League wareega 16-ka iyadoo the Old Lady ay go’aansatay inay horumar ka sameyso tartankaan maadama sanadkii lasoo dhaafay guuldaro kala kulmeen kooxda Lyon.
Ninka ku dhashay dalka portugal gaar ahaan Madeira Ronaldo oo 36 jir ah kuma uusan ciyaarin kubbadda cagta Portugal tan iyo bishii Nofeembar 2016 markii Real Madrid ay ka adkaatay kooxdiisii hore ee Sporting CP 2-1 ciyaar ku idlaatay oo ka tirsaneed Champions League.
Pirlo ayaa sheegay in ku soo laabashada Ronaldo ay dhiira galin dheeri ah u tahay gooldhaliyaha ugu sareeya xulka Portugal sidoo kalena waa kabtanka caalamiga ah ee xulkiisa Cristiano Ronaldo wuxuu ku laabtay dalkiisa Portugal,” ayuu yiri Pirlo Talaadadii. Waxa uu doonayaa inuu goolal intaas ka badan dhaliyo.
Wuxuu cadeeyay kulankii Coppa Italia iyo taariikhdiisa Champions League inuu ku nool yahay marxaladaha garaacista Wuxuu ku faanayaa inuu ku soo laabto guriga wuxuuna doonayaa inuu tuso cida uu weli yahay Cristiano Ronaldo.
Ronaldo ayaa labo jeer shabaqa soo taabtay kulankii semi-finalka ee Juve ee Coppa Italia ee ay ka badiyeen Inter horaantii bishaan, halka uu shan jeer ku guuleystay Champions League afar jeer Real Madrid iyo hal jeer Manchester United.
Si kastaba ha noqotee Ronaldo ayaan meel wacan ka gaarin koobkaan tan iyo markii uu u dhaqaaqay Juventus sanadkii 2018, isagoo guuldarro ka soo gaartay 2018-19 wareega Ajax iyo 2019-20 ee ugu dambeysay ee Lyon.
Si la yaab leh tan iyo markii uu ka soo dhaqaaqay Madrid una dhaqaaqay Turin, Ronaldo wuxuu dhaliyay dhamaan toddobadii gool ee Juventus ee wareega 16ka Champions League Cristiano waa mid gaar ah, laakiin anigu ma ihi kan helay arrintaas ayuu yidhi Chiellini.
Isaga ayaa qiimo noogu daray Nasiib ayaan ku leenahay inaan isaga la tababarno si aan u aragno maalin kasta sirta yar ee ka caawineysa inuu noqdo horyaal run ah oo uu yahay.
Maanta waxaan ku ciyaari doonaa Portugal, gurigiisa, waxaan rajeynayaa inuu xitaa yeelan doono dhiirigelin badan si uu u ciyaaro si wanaagsan oo uu u dhaliyo goolal badan.
Previous articleRomas oo sii joogi kara Real madrid hadii loo sameeyo sababtaan.
Next articleJorgen Klopp oo ka hadlay guushii xalay iyo Allison oo dib u helay bandhig qurxoon.